Sækja Ashampoo Photo Optimizer 2018 1.0.0 fyrir Windows
Sækja Ashampoo Photo Optimizer 2018
Ókeypis Sækja fyrir Windows (42.90 MB)
Sækja Ashampoo Photo Optimizer 2018, Ashampoo Photo Optimizer 2018 soo dejintu waxay ku jirtaa meesha ugu sareysa ee raadinta kuwa doonaya barnaamij tafatirka sawir bilaash ah. Ashampoo Photo Optimizer 2018 waa codsi tafatir sawir ah oo loo adeegsado kombiyuutarada Windows-ka ku shaqeeya Ashampoo Photo Optimizer 2018 wuxuu u taagan yahay inuu yahay mid ka mid ah barnaamijyada caanka ah ee la soo saaray si sawiradaadu u noqdaan kuwo qurux badan. Wadnaha Photo Optimizer 2018 waa muujinta tooska ah ee tafatirka sawirka.
Waad ku mahadsan tahay qaabkan loo isticmaali karo adigoo riixaya hal badhan, dalabku wuxuu falanqeynayaa sawirrada si wadajir ah iyo falanqeyntiisa caqliga ah wuxuuna adeegsanayaa astaamaha ugu habboon sawirkaas. Photo Optimizer 2018, oo la sheegay inay si otomaatig ah u ogaanayso qodobbada daciifka ah sida soo-gaadhista aan saxda ahayn, kala-duwanaansho laaanta ama midab-xumida sawirrada,Waxay maamushaa inay siiso sahlanaan weyn adeegsigeeda iyadoo la saxayo faahfaahinta sida dheelitirka cad iyo faafitaanka farqiga.
Sidee Loohelaa Ashampoo Sawirqaadaha Sawir Qaadaha 2018 Bilaash?
Ashampoo Optimizer 2018, oo la horumariyey iyada oo la tixgelinayo jawaab celinta laga helay ku dhowaad 5000 oo isticmaale isla markaana loogu talagalay inay ahaato mid aad u saaxiibtinimo leh sababtan awgeed, ayaa soo jiidanaysa feejignaanteeda.
Caadi ahaan, nooca buuxa waxaa lagu iibiyaa qiimo dhan $ 30, waxaana loo isticmaali karaa bilaash, gaar ahaan kuwa raacsan Tamindir. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa cinwaan e-mayl ah si aad dalabka ugu sameyso bilaash. Kadib markaad hesho arjiga adoo gujinaya batoonka soo degsashada ee kore, waad rakibi kartaa oo gebi ahaanba bilaash ayey ka dhigi kartaa adoo galaya cinwaanka e-maylkaaga.
Ashampoo Photo Optimizer 2018 Sérstakur
Skráarstærð: 42.90 MB
Hönnuður: Ashampoo GmbH Co. KG